Rigoorada Ama Gool Kulaadka oo hadda kadib isku badaleyso cilmi labarto ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Bulshada Rigoorada Ama Gool Kulaadka oo hadda kadib isku badaleyso cilmi labarto
Rigoorada Ama Gool Kulaadka oo hadda kadib isku badaleyso cilmi labarto
Marka Ay kooxuhu isu diyaarinayaan ka niqashitaanka suurtaglnimada in ay rigoore ama Gool-kulaad yimaado lagama wada hadlo hadda sida uu nasiibku noqonkaro ee waxaa laga hadlaa cilmi ku dhisan sidii lugu badinlahaa.
Markey timaado rigoore ama penalty sidi caadada eheed inta badan waxa la saadaaliyaa kooxda ugu nasiibka badan rigoorada oo taariikh ahaan soo badan jirtay.
Kidib guuldaradii Spain ay kala kulmeen koobka adduunka wareega 16-ka taa oo ay Rashiya kaga badisay penalty ayay inta badan wargeysyadu waxay ku qeexeen in ay aheyd nasiib .
Taasi waxay aheyd mid run ah marka loo eego qaabka saadasha rigoorooyin sandihii tagay, balse hadda gool hayeyaasha hadda iyo laacibka ridaya shoot-ka go’aan koodau wuxaa sal u ah xog cilmiyeysan oo la baray.
Afarti sanadood ee tagay kooxaha ugu waaweyn ee reer yurub waxay ku qarash gareynayeen boqolaal kun oo dollar faraqeynta muuqaalo soconaya saacado badan kaa oo laga soo uruuriyay ciyaarihii dhacay taas u sahleyso in la barto laacib walba halka uu dhigo kubadda inta badan.
Xitaa markii uu kulanka xoogiisa u Soo gudbay Rigoorooyinka, ayaa shantii gool ee ugu horeysay waxey ahaayeen kuwa ku saleeysan xulasho loona soo doortay akhbaar ku ku saleeysan cilmi.
Iyada oo habka shaxada saas ahaa ayey qaateen go’aan xilli ay adeegsanayaan xogtaan maadaama ay shanti gool oo ugu horeysay ahaayeen kuwa ugu muhiim islamarkaana u baahnaa in looqaado hab adag oo cadaadis ku saleysan.
“Inaga koobka aduunka waxaan ku aheynay tijaabo hor u socod ah si aan u hubinno in aan soobaxno Waxana jiray hab degan oo aan ku soo gaarnay heerka soo dhawaashada” ayay dhaheen xulka qaranka England, Tababare Gareth Southgate oo markii ugu horeeyay hogaminayey xulka qarankiisa ayaa ka badiyay qaranka Croatia Dhamadkii wareega 16-ka. Cayaaraha kale ee English Premier League iyo La Liga ayaa sanadahaan si fiican loo cayaaray iyadoo kooxaha intooda badan ee koobka aduunka ay midnaba aysan u shaqeyn si madaxbanaan si loo soo aruuriyo xogta ku saabsan Rigoorooyinka Ama Gool-kulaadka ama ay sharaxaan shaqooyinka ay kooxaha ku bixiyaan shirkadaha waa weyn sida shirkadda Opta.
Tani waa kooras qaali ah waxeyna kooxaha bixindoonaan ilaa $400,000 oo dollar mudo seddax bilood gudaheed ayeyna kubixinayaan sidaana waa yiri howl wadeen ka tirsan hashirkada Opta, oo iyadu bixisa. Casharadaan Falanqeyntaan laga soo uruuriyay oo gaaraya ilaa Kun Muuqaal, oo ah cayaaraha iyo kulamada caalamigga ah cayaaryahanka Gool-kulaadka tuuraya iyo Goolhayaha.
Sida ay ku bilaabeen, Waxeyna isku dayeen kaalmo cad cad kuwaa oo ay is fudud cayaaryahanadooda ay ku ilaashadaan, Tusaale ahaan.’ Hadii uu cayaaryahanka dunida ugu wanaagsan inta badan wuxu ku soo noqnoqdaa qaabkiisa iyad uu qaadanayo go’aankiisa.
Tusaale Cayaaryahanka reer Brazil ee Neymar waxa uu badana shuudaa rikoorooyinka ama gool-kulaadka, Wuxuuna rigoorooyinka marka uu ridayo goolhayaha ka dhigaa dhanka midig ama dhexhoosaadka waana sumadiisa uu caanka kuyahay, xaqiiqdii waa ayku adagtahay in uu ku laado bidexda rigoorooyinka ama gool-kulaadka.
Goolhayaha Belgiam-ka Thibaut Courtois nooc ahaan waxa uu doorbidaa midig ka cayaar ,cayaaryahanada soo shuuda gool-kulaadka hadii ay midig uga soo shuudaan waa ay ku raaxeytaan waxeyna ka gaaraan guul wareegto ah.
Si joogto ah ayey gool-kulaad tuurayaasha usameyaan, kuwaas oo u muuqda in ay ujeedadoodu tahay wax yar, Falanqeeyayaasha xitaa waxay isticmaalaan habab tirakoob oo kala duwan, waxeyna nooc ahaan u shaqeeyaan ganacsi maalyadeed si loo fiiriyo xogtii shuudadkii u dambeeyay tusaale ahaan.”bidex, bidex, dhexda, midig, dhexda”.
In la isku dayo in la saadaaliyo meesha ay u badan tahay inay waa iney aado, Celcelis ahaan dhamaan boortayaasha ama gool-hayayaasha waxey 20% boqolkiiba ayuu yiri Palacios-Huerta.
Sidaa darteed muhiimada ay leedahay inuu ku caawiyo goolhayaha ayaa ka weyn inuu ka caawiyo gool-kulaad soo tuurayaasha, iyadoo Xaalado badan, ay labada kooxba heli doonaan xogtaas, sidaa awgeed, labada dhinacba waxay ogaan doonaan qaabab kasta oo suurtagal ah, falanqeeyayaashu waxay sidoo kale ku dhejin karaan muuqaalo, iyaga oo jarjarayo muuqaalada,
Si ay iskugu dayaan oo ay u aqoonsadaan wixii isbeddel yar oo ku yimaada jimicsiga jirka ama duruufta oo gacan ka geysan kara goolhayaha lagu ogaanayo meesha kubada laga yaabo inay ka gasho,Tusaale ahaan, haddii ciyaaryahan uu jirka u furtay sida uu u diyaar garoobayo kubada, badanaa wuxuu jecelyahay in uu rigoorayaasha ama gol-kuaadka bidix ka dhigo goolhayaha. Celcelis ahaan, goolhayayaashu waxay maamulaan inay badbaadiyaan boqolkiiba 20 goolasha, sida uu qabo la-taliyaha ciqaabta.
Gool-kulaad tuuraha waa inuu lahaadaa luqad jireed oo wanaagsan, taas oo adkeyneysa inuu akhriyo,” ayuu yiri Daniel Memmert, oo ah lataliye ciqaabeed oo xulka qaranka Jarmalka ah.
Tani waxay ka dhigan tahay in xabadku ay furan tahay, garbaha waa ay ka danbeeyaan, waana inuu mar walba daawadaa gooldhalinta marka uu ka soo laabto booska rigoorada
Kadib gool-hayaha mudnaanta labaad ee kooxdu waa inuu helo habab lagu hagaajinayo fursadaha ay ku badin karaan goolasha. Kooxaha ayaa dhigi doona ciyaartoygan si ay uga dhigaan kuwo aan la saadaalin Karin, oo isku day in ay ku quudiyaan macluumaadka ku saabsan halka uu goolhaye gaar ah u badan yahay inuu ku dhasho.
Xogta ayaa xitaa loo isticmaalaa in ay saameyn ku yeeshaan jawiga farsamooyinka – falanqeeyayaasha ayaa ogaaday in kooxo ku shaqeeya rigoore jawi cadaadis leh, iyada oo tartamada yaryar ee u dhaxeeya ciyaartoyda ama warbaahinta iyo taageerayaasha daawashada, ay u badan tahay inay ku guuleystaan.
Kulamada xusuusta ayaa sidoo kale ah qeyb muhiim ah oo ka mid ah rigoorada rigoorada. Markii Kasper Schmeichel uu diyaar u yahay inuu wajahayo rigoore kasta oo Croatia udambeysay 16kii kulan ee ugu danbeysay ee uu ka horyimaado Denmark, wuxuu ku fekeraa inuu hal dhinac ku leexiyo ka hor inta uusan dooran. Waxay ku dhawaatay shaqeyn. Schmeichel ayaa badbaadisay labo rigoore. Sidaa darted, kooxuhu xitaa waxay u shaqeeyaan la-taliyeyaal khabiir ah oo cilmi-nafsi ah si ay u sameeyaan xeelado cusub.
“Hal xeelad oo wax ku ool ah ayaa ah goolhayaha si aad u yar dhinaca bidix ee bartilmaameedka, isagoo raadinaya tifaftiraha inuu ku fekero inuu jiro meel ka baxsan midigta,” ayuu yiri Memmert.
“Marka laga soo tago, waxa uu u badan yahay inuu go’aansado inuu si sax ah u garaaco, marka goolhayaha uu ku soo baxo jihadaas, wuxuu heystaa fursad wanaagsan oo uu ku badbaadiyo rigoorada.”
Laakin waxaa jira hal daruuri oo laga yaabo inay bangigan waddaagaan.
Iyadoo ciyaartoyda ay u baahanyihiin ugu yaraan 120 daqiiqo ka hor inta aan la fileynin inay soo garaacaan, ayna u feejignaadaan istaraatiijiyadaha kala duwan ee mucaaradka ah ee ciyaaraha ciyaarta ama weerarka oo sidoo kale lagu baran lahaa ciyaarta ka hor, macluumaadka xad dhaafku waa halis dhab ah.
“Marginsku waa mid aad u fiican, sidaas darteed xogta noocaas ah waxay sameyn kartaa farqi weyn,” ayuu yiri Southgate.
“Hadii ay ciyaarta ku soo dhamaato, waa inaan hubinaa in wax waliba ay xasilan yihiin, mana jiraan codad badan oo madax ah.”
Previous articleSAWIRO: Jir ama dooli Lacag dhan 1.2 milyan ka cunay Banki Caan ah…
Next articleSi Fiican U Fiiri Xuruufta Teleefankaaga Gacanta, Haddii Aad Si Fiican U Arki Weydo Waxaad Qabtaa Cudurkan..
Daawo: Iran oo soo bandhigtay qaabkii ay u afduubatay markabkii shidaalka ee Britian
Daawo wiilkan yar ee dalxiiska loo soo kaxeeyay waxa ka qabsaday tareenka